China Hydroxyl kwụsịrị Polybutadiene ụlọ ọrụ na-emepụta | YANXA
Hydroxyl kwusiri Polybutadiene
Hydroxyl-terminated polybutadiene (HTPB) bụ ụdị nke roba mmiri mmiri nwere dị iche iche molekụla dị arọ (ihe dị ka 1500-10,000 g / mol) na nnukwu ọrụ nke mmeghachi omume. Roba mmiri nwere a pụrụ iche Nchikota Njirimara gụnyere a obere iko mgbanwe okpomọkụ, ala okpomọkụ mgbanwe, elu siri ike-loading ikike, na magburu onwe eruba ikike. Ejiri ha mee ihe na nrapado, ihe mkpuchi, ihe mkpuchi, ọgwụ, yana akụrụngwa ike.
HTPB bụ translucent mmiri mmiri na agba yiri ka wax akwụkwọ na viscosity yiri ọka sirop. Njirimara a dịgasị iche iche n'ihi na HTPB bụ ngwakọta karịa ngwakọta dị ọcha, ma mepụta ya iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ.
1. IHE ： Mmiri na-enweghị ntụpọ ma ọ bụ na-acha odo odo
2. nkọwapụta, Nkebi nke m ：
Hydroxyl ọdịnaya mmol / g
0.47 ~ 0,53
Mmiri,% (w / w)
(dika H2O2),% / (w / w)
Nkezi ibu Molekul, g / mol
Viscosity na 40 ℃, Pa.s
3.TỌPECTARA, Akụkụ nke Abụọ ：
Viscosity na 25 ℃, Pa.s
4. Ojiji: HTPB bụ nke a na-ejikarị na ụdị ụdị ọ bụla nwere kemịkal siri ike na ụgbọelu na ụgbọ elu, oghere gunpowder, maka iji obodo, ọ nwere ike iji ya na mpaghara gụnyere ngwaahịa PU, na-emepụta ngwaahịa elastomer, agba, eletriki. gwara mmanụ sealant ihe wdg
5. Net nha 170kg na 200 lita polyethylenelined metal drum.
Ahaziri n'ichepụta dị maka dị iche iche na ngwa dabere na gị oru chọrọ.
Anyị bara ọgaranya R & D, na mmepụta ngalaba, ike nke na-emepe emepe na ikpe-na-amị ọhụrụ ihe onwunwe na nkọwapụta dị ka kwa kpọmkwem chọrọ.
Maka ozi ndị ọzọ, biko zitere email na "pingguiyi@163.com".
Nke gara aga: Sodium Chlorate
Osote: Atomized Magnesium ntụ ntụ